Izibalo zami: I-Google Analytics ye-iPhone | Martech Zone
Izibalo zami: I-Google Analytics ye-iPhone
NgoLwesithathu, July 10, 2013 Douglas Karr
KISSmetrics bakhiphe uhlelo olusha lwe-iPhone FREE olubizwa ngokuthi Izibalo zami. Kuyindlela esheshayo yokubona ukuthi amamethrikhi wakho we-Google Analytics asebenza kanjani uma ukude nedeski lakho.
Ngasekuqaleni konyaka, abantu be-KISSmetrics babefuna uhlelo lokusebenza oluhloniphekile lwe-Google Analytics ukubasiza ukugcina amathebhu kudatha yabo. Futhi abakwazanga ukuyithola. Kungaba ukuthi izinhlelo zokusebenza zeselula zazingu-WAY eziyisisekelo kakhulu futhi zazingakuvumeli wenze ukuqhathanisa, noma zazama ukwenza INDLELA ngokweqile futhi kwakungelula ukuzisebenzisa.
Izibalo zami ibonisa idatha yakho ye-Google Analytics uma usohambeni, emhlanganweni, noma udinga isibuyekezo esisheshayo.
With Izibalo zami, ungaqhathanisa idatha yanamuhla nezolo, usuku olufanayo ngesonto eledlule, nangosuku olufanayo emasontweni amabili edlule. Ungaqhathanisa nemininingwane yayizolo namasonto adlule noma idatha yaleli sonto namasonto adlule.
Izibalo zami ikunikeza idatha oyidingayo ngokushesha. Uzothola ukufinyelela okusheshayo ekuvakasheni kwakho, izivakashi ezihlukile, ukubukwa kwekhasi, izinjongo, ukuthengiselana kwe-ecommerce nemali engenayo ye-ecommerce.
Tags: Imali engenayo ye-EcommerceUkuhwebelana Kwe-ecommerceimigomoI-google analyticsuhlelo lokusebenza lweselula lwe-google analyticsiOSiphoneukubukwa kwekhasiAbavakashi AbahlukileUkuhambela
Izimpawu Ezi-6 Sekuyisikhathi Sokufaka I-Software Yakho Yezibalo
Icala Lokusebenziseka Kwamaselula
Sep 20, 2013 ku-3: 08 AM
Wow, ngicabanga ukuthi lolu hlelo lokusebenza luhle kakhulu kulabo abadinga ukuvuselelwa okusheshayo.